Gagaarida Nolosha iyo Guryaha Haynta | LawHelp Minnesota
Gagaarida Nolosha iyo Guryaha Haynta
Assisted Living and Nursing Home Laws in Minnesota (PDF)302.25 KB
Gargaarida nolosha iyo Guryaha Hayntu waxa ay u muuqan karaan wax isku mid ah. Waxa aad ka wici kartaa Khadka Xiriirka (LinkAge) Waayeelka ee ah 1-800-333-2433 wixii akhbaar ah ee ku saabsan dejinta qorshe daryeel.
Goobaha Gargaarida Noloshu waa guryo kiro ah oo fidiya adeegyo sida cunto maalin walba ah, nadaafad, gargaar nolol maalmeedka ah, xarakaad dhaqdhaqaaq ama wicitaanada adeegyada gurmadka degdeg ah.
Goobaha Gargaarida nolosha waxaa ku jiri kara:
Goobo guryo tas’hiilaad leh ah
Guryaha dadka hawlgabka ah
Daryeelada xusuusta iyo daryeelada naf ka dhowka
Guryo kali kali loogu nool yahay lehna adeegyo
Celcelis ahaan kharasha ku baxa Goobaha Gargaarida Noloshu waa $4,000 bishii laakiin kharashku intaa waa ka badnaan karaa ama waa ka yaraan karaa.
Waxyaabaha aad ka fakari hadii aad Raadinayso Goob Gargaarid Nolosha leh
Dhamaan goobaha gargaarida oo dhami ma qaataan lacagta barnaamijyada dowlada. Hubi inaad eegto arrintaa.
Hadii aad doonayso in dowladdu ay kaa bixiso kharashkaaga goobaha gargaarida nolosha waa inaad dirsataa codsiga Gargaarka Caafimaad (MA) ee mudadda dheer ah IYO Qiimeynta Xulashoodyinka MN (MN Choices).
Waxaa dhici karta inaad adigu jeebkaaha ka bixiso kharashyada guri ku daryeelida inta laga ansaxinayo codsiga (MA). Taasi waxa ay qaadan kartaa asbuucyo ama xataa bilooyin.
Barnaamijka (MA) waxa uu bixin karaa adeegyada aad u baahan tahay, laakiin waxa aad u baahan tahay inaad bixiso kirada iyo kharashka cuntada. Dadka qaarkii waxaa dhici karta inay awoodaan inay ka helaan caawin Qolyaha Gargaar Guryaha. Si aad u isticmaasho Gargaarka Guryaha, baahidaada Gargaarida Noloshu waa inay kharashka kirada iyo cuntada ay ka hoos marisaa $934-bishii.
Barnaamijka (MA) waxa uu leeyahay xadidaadyo hantida ah. Hadii aad hanti balaaran leedahay waxaa dhici karta inaad u baahato inaad qareen kala tashato sida ugu roon ee aad ugu isticmaali karo dakhligaaga iyo hantidaada hadafyadaada.
Sidee ayaan u doortaa Goob Gargaarida Nolosha ah?
Ka fakar nooca ay yihiin adeegyada aad rabtaa iyo meesha aad doonayso inaad ku noolaato
www.minnesotahelp.info waa ilo wanaagsan oo laga heli karo akhbaar u saabsan Goobaha Gargaarida Nolosha ee Minnesota.
Riix “Waayeelka” (“Seniors”)
Riix Guryaha (“Housing”) (oo mawduucyada ku hoos jira) (“more topics”)
Riix “Goobaha Gargaarka” (“Supportive housing”)
Hadii aad awoodo, waydii dadka hadda meesha ku nool ra’yigooda goobta
Waa maxay xaquuqdayda Deganaha Goobta Gargaarida Noloshu?
Waxa aad leedahay xaquuqda joogtada ah ee kiraystaha
Waa inaad bixiso kiradaada mana jabin kartid xeerarka heshiiska liiska.
Qolada guriga lehi waa khasab inay guriga wixii ka halaaba ay kaa hagaajiyaan. Eeg warqadayada xogta aruursan ee Ka helida Qolada Gurigu in ay Hagaajiso wixii Halaysan Getting your Landlord to Make Repairs.
Qolada guriga lehi waa inay u hogaansamaan sharciyada xaquuqda kirstaha guriyaha. Taa waxaa ku jira maciinada macquulka ah ama dib u habayn ku sameynta guriga hadii aad u baahato. Eeg warqadayada xogta aruursan ee Ma u Baahan Tahay in Qolada Guriga aad uga jirtaa ay guriga wax uga Bedesho Naafanimadaada Awgeed? Do You Need your Landlord to Make a Change Because of Your Disability?
Guriga lagaama saari karo hadii aysan qolada gurigu dacwo ka xareysan maxkamad.
Waxaad kaloo leedahay ilaalino kale oo dheeraad ah.
Hadii goobta Gargaarida Noloshu ay joojiso qandaraaskaaga adeega, halkaa waa aad ku sii noolaan kartaa goobta waxa aadna dibada keensan kartaa adeegyo aad adigu leedahay.
Gurigaaga waa aad gashan kartaa kaamarda si aad ula socoto amaankaaga. Waa inaad siiso wakiilka dadweynaha ee Goobta Gargaarida Nolosha ama Daryeelka mudadda dheer foom saxiixan. Waxa aad ka heli kartaa foomamka shabakada health.state.mn.us/facilities/regulation/emonitoring/.
Laga bilaabo bisha Ogoosto 1, 2021, waxa aad codsan kartaa dacwo dhagaysi hadii goobta Gargaaridu ay joojiso qandaraaskaaga.
Hadii adiga ama qof adiga dantaada ka shaqeynayaa uu askhtakoodo, ama uu xareeyo warbixin tacadi, ama uu u istaago xaquuqdaada, goobta gargaarida noloshu iyo/ama shaqaalaheedu ma sameyn karaan wax ay adiga kaaga aarsanayaan.
Waxa aad xaq u leedahay inaad ku esho akhbaarta sida ugu fiican ee aad ku fahami karto. Taasi waxaa dhici karta inay noqoto afka kale, oo ay ku jiraan afka farta indhoolayaasha ama afka dhagoolayaasha (ASL).
Guryaha Hayntu waa ay kuwan yihiin goobaha Gargaarida Nolosha. Waxa ay leeyihiin sharciyo iyo ilaalino siyaad ah. Barnaamika (Medicare) waxaa dhici karta inuu bixiyo qayb ka mid ah kharashka haynta.
Gargaarada Caafimaad (MA) waxa ay iyana bixin karaan kharashaadka Guryaha Haynta.
Waa maxay xaquuqa aan leeyahay ee deganaha guriyaha haynta ah?
Waxa aad leedahay xaquuqda joogtada ah ee kiraystaha. Waxa aad leedahay xaquuqaha kor ku xusan ee goobaha Gargaarida Nolosha. Waxaad kaloo leedahay ilaalino kale oo dheeraad ah.
Waxaa jira 6 sababtood uun oo lagaaga eryi karo Guryaha Haynta:
1) Xaaladaadda caafimaad oo hagaagta
2) Rugta oo la xiro
3) In kiro lagugu leeyahay
4) Inaadan amaan ku sugnayn
5) Cid kale aysan amaan ahayn hadii adiga meesha aad joogto
6) Rugtu aysan ka soo bixi karin baahidaada
Xaquuqda Dastuuriga ah ee Daryeelada Caafimaad waxa ay kaa ilaalisaa in lagugu khasbo inaad qaadato dawo ama daryeel aad adigu diidan tahay.
Hadii aad u baahan tahay inaad askhtakooto:
La hadal rugtaada daryeel. Waxaa dhici karta inaad awoodaan inaad xalisaan wixii khilaafaad ah oo jira.
Wac Wakiilka Dadweynaha ee Daryeelada Mudadda Dheer ah ee MN
Wac Xafiiska MN ee Ashtakooyinka Rugaha Caafimaadka
Ma u baahan tahay caawimaad ama akhbaar kale?
Wac khadka Xiriirinta Waayeelka (Senior Linkage Line) ee ah 1-800-333-2433
Warqadan xogta aruursan waxaa maalgeliyey qayb ahaan hay’yada agagaarka Magaalooyinka ee Daryeelida duqowga iyo Waayeelka Mareykanka ah.